ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျူပီတာ၊ ကွင်းများနှင့်စေတန်၊ ယူရေးနပ်စ်၊ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်များပုံ
ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူး (Gas giant) ဆိုသည်မှာ ကျောက် သို့မဟုတ် အခြားအခဲပစ္စည်းများမပါဘဲ ဓာတ်ငွေ့သက်သက်ပြီးသော ကြီးမားလှသောဂြိုဟ်ကြီးဖြစ်သည်။ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများကို မအောင်မြင်သောကြယ်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ အကြောင်းမှာ ယင်းတို့တွင် ကြယ်များတွင်ပါဝင်သည့် အခြေခံ ဒြပ်စင်များဖြစ်သည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ်တို့ ပါဝင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးနှစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဂျူပီတာ (ကြာသပတေးဂြိုဟ်) နှင့် စေတန် (စနေဂြိုဟ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ အခြားဂြိုဟ်ဘီလူးနှစ်ခု ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်နှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တို့မှာ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်များမဟုတ်ဘဲ ရေခဲဂြိုဟ်ဘီလူးများဖြစ်ကြသည်။ များစွာသော နေအဖွဲ့အစည်းပြင်ပ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများတွင် ထပ်တူကျသော ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းများရှိကြသည်။ ကမ္ဘာမြေ ဒြပ်ထုထက် ၁၀ဆကျော်လျှင် ဂြိုဟ်ဘီလူးများဟုသတ်မှတ်သည်။ ဒြပ်ထုနည်းပါးသော ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်များကို "ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ပုများ"ဟု ခေါ်သည်။ ဂျူပီတာနှင့် စေတန်ဂြိုဟ်တို့တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် ဟီလီယမ် အဓိကပါဝင်ပြီး ဒြပ်ထု၏ ၃-၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကြား ရှိသည်။ ပင်မအူတိုင်တွင် ကျောက်သားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းပြီး အလယ်လွှာတွင် သတ္တုဆန်သော အရည်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် ဝန်းရံထားကာ အပြင်ဘက်ကျသောအလွှာကို ဖိသိပ်ထားသော မော်လီကျူလာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အပြင်ဘက်အကျဆုံး ဟိုက်ဒရိုဂျင်လေထုတွင် မြင်နိုင်သောတိမ်တိုက်များ၊ ရေနှင့် အမိုးနီးယားတို့ ပါဝင်သည်။ သတ္တုဆန်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်အလွှာဆိုသည်မှာ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးတိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး မြင့်မားသောလေထုဖိအားကြောင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်များကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် ပြောင်းပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပူချိန် ၂၀၀၀၀ ကယ်လ်ဗင်၌ ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ၏ ပင်မအူတိုင်တွင် လေးလံသောဒြပ်စင်များ တည်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ရပြီး ယင်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို အပြည့်အဝ နားမလည်သေးပေ။ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ထက် ဒြပ်ထု ၁၃ ဆ ပိုမိုနည်းသော ကြယ်ပုညိုများနှင့်) ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူးများ၏ ခြားနားချက်ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြသည်။ လေ့လာမှုတခုအရ ကြယ်ပုညိုများသည် ယင်းတို့၏ သမိုင်းကာလတခုတွင် နယူကလိယား ဖျူးရှင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။
↑ Mayor၊ Michel; Pepe၊ F.; Lovis၊ C.; Queloz၊ D.; Udry၊ S. (2008)။ "The quest for very low-mass planets"။ in Livio၊ Mario; Sahu၊ Kailash; Valenti၊ Jeff (eds.)။ A Decade of Extrasolar Planets around Normal Stars။ Space Telescope Science Institute Symposium Series (No. 19)။ Cambridge University Press။ p. 20။ ISBN 978-0-521-89784-6။ Unknown parameter |month= ignored (အကူအညီ)
↑ StarGen - Solar System Generator, 2003
↑ D'Angelo၊ G.; Lissauer, J. J. (2018)။ "Formation of Giant Planets"။ in Deeg H., Belmonte J. (ed.)။ Handbook of Exoplanets။ Springer International Publishing AG, part of Springer Nature။ pp. 2319–2343။ arXiv:1806.05649။ Bibcode:2018haex.bookE.140D။ doi:10.1007/978-3-319-55333-7_140။ ISBN 978-3-319-55332-0။ S2CID 116913980။
↑ "Deuterium Burning in Massive Giant Planets and Low-mass Brown Dwarfs Formed by Core-nucleated Accretion" (2013). The Astrophysical Journal 770 (2). doi:10.1088/0004-637X/770/2/120. Bibcode: 2013ApJ...770..120B.
↑ Burgasser၊ Adam J. (June 2008)။ Brown dwarfs: Failed stars, super Jupiters။ Physics Today။
ဥက္ကာပျံများ/ဥက္ကာပျံ လများ (ဥက္ကာခါးပတ်)
အခြားကြည့်ရန်: နေအဖွဲ့အစည်းရှိ အရာဝတ္ထုများစာရင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဓာတ်ငွေ့ဂြိုဟ်ဘီလူး&oldid=720962" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။